Visual Studio Code ikozvino inowirirana neRaspberry Pi OS | Linux Vakapindwa muropa
Visual Studio Code ikozvino inowirirana neRaspberry Pi OS
Sezvazvinoitika mwedzi nemwedzi nyowani nyowani ye Visual Studio Code yakaunzwa uye mune iyi vhezheni nyowani 1.55 yakaratidzwa, chimwe chezvinhu zvakakosha zvikuru ndezvekuti ikozvino inotsigira Raspberry Pi OS, iyo yakatsaurwa Raspbian forogo senge nyowani yekushandisa system yeese Raspberry Pi pamwe nekumisikidzwa kweiyo 8GB RAM modhi.
Nezvo, Microsoft yatora danho rekugadzirisa zvinhu uye tora nhanho netsoka yekurudyi mushure mezviitiko makore apfuura akange amisa makakatanwa apo, muna Kukadzi, iyoIyo Raspberry Pi Foundation yakatanga kuisa Microsoft repository inokodzera pane ese maRaspberries aive neiyo yavo Raspberry OS akaisirwa, pasina ruzivo rwevaridzi vawo
Panguva iyoyo, iyo pfungwa yekuwedzera Microsoft's apt repository yaive zvakare yekuita kuti zvive nyore kushandisa iyo Visual Studio Code yekuvandudza nharaunda.
Uku kufamba neRaspberry Foundation Ini handina kuenda kusingaonekwe mukati memunharaunda yeLinux, iyo yakanga yaenda kumberi kupikisa kushomeka kwekujeka uye telemetry. Muchokwadi, iyo yekuisa yekuisa yakaitwa chinyararire, pasina mvumo yemushandisi.
Vamwe vashandisi havana kumira kurangarira kusagadzikana kuri pakati peLinux neMicrosoft nezve telemetry. Muchokwadi, yega yega apt-tora zvinyorwa paRaspberries izvo zvaive zvichishanda neyechizvino vhezheni vhezheni yeRaspberry OS inoshanda sisitimu uye repository yakaiswa chinyararire inokonzeresa kubatana kumaseva eMicrosoft.
Iyi inzira inoshanda yeMicrosoft yekuziva vanhu sevashandisi veRaspberry Pi inoshanda sisitimu pavanowana mamwe masevhisi akadai seBing kana GitHub (ndeyaMicrosoft) vozogadzira chimiro chekushambadzira kwakanangwa neruzivo urwu.
Muchokwadi, ichi chiziviso chitsva chekutsigira Visual Studio Code pane Raspberry Pi Brilliant Jim Bennett, Microsoft Raspberry Pi nyanzvi akataura zvinotevera:
“Ndinoona vana vachidzidza Python muchikoro vachishandisa chishandiso chimwe chete, vozopedza chikoro vanodzidza kugadzira dandemutande mukirabhu yekukodha nechimwe chombo. Ivo vanogona ikozvino kuita zvese zviri zviviri zvakafanana app, kudzikisa kugona kwekuziva. Ivo chete vanofanirwa kudzidza chishandiso chimwe chete, imwechete debugger, imwechete kumisikidza Sanganisa izvozvo neRaspberry Pi 400 nyowani uye une mhinduro-ye-imwe-yekudzidza kodhi, ”akadaro. Kubva ikozvino zvichienda mberi, iyo sudo apt kuisa kodhi (inomhanya mushure meiyo sudo apt kugadzirisa) inofanira kubvumidza Visual Studio Code kuisa paRaspberry Pi OS mushure mekurodha pasi.
Chimwe chinhu chitsva chinoratidzwa mune iyi nyowani vhezheni yeVisual Studio Code kugona, izvi imhaka yekuti iyi vhezheni ikozvino inotsigira vaverengi vechidzitiro kune akawanda masalows. Huwandu hwemitsara iyo muverengi wescreen anogona kuzivisa yakawedzerwawo kubva pa100 kusvika pa1000. Mukuwedzera, kubviswa kwese kwemuganho kuri kutariswa.
Dzimwe shanduko dzinosanganisira kutsigirwa kwemaprofiles anotsanangurwa mune terminal, iyo inobatsira zvakanyanya kuvhura Shell kunze kweiyo default iyo.
Pakupedzisira, zvakare Izvo zvinoonekwa kuti mamwe maAPI akawedzerwa kubvumira kuwedzerwa kutarisa kana mushandisi akashandisa -disable-telemetry command line mureza kudzima telemetry uye kuti zvimwe zvivakwa zvakawedzerwawo kune yekuwedzera API env chinhu uye OnDidChangeTelemetryEnabled yava kupisa chero nguva iriTelemetryEnabled.
Kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezve iyo livery yeiyi vhezheni vhezheni yeVistual Studio Code 1.55, unogona kutarisa ruzivo mu chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Visual Studio Code ikozvino inowirirana neRaspberry Pi OS
Izvo zvakangotitorera kuvimba kwedu neiyo Raspberry pi OS system nekuunza yakasainwa repositori iyo inosanganisira telemetry pasina yambiro.
Maitiro ekuisa postmarketOS paPineTab uye shandisa Plasma Mobile yakatwasuka
LibreOffice 7.1.2 Nharaunda Yekugadzirisa inogadzirisa anopfuura makumi matanhatu mabugs